तालु खुइलिएर लाजमर्दो भयो ? नो चिन्ता ! यी उपाय अपनाउनुहोस् त्यसपछि समस्या चट् - Internet Khabar
तालु खुइलिएर लाजमर्दो भयो ? नो चिन्ता ! यी उपाय अपनाउनुहोस् त्यसपछि समस्या चट्
काठमाडौं । वृद्ध भएपछि कपाल झर्नु, तालु खुइलिनु सामान्य हो । तर बदलिदो हावापानी, जीवनशैली आदिका कारण युवाहरुमा पनि कपाल झर्ने र तालु खुइलिने समस्या बढ्दै गएको छ । कपाललाई सौन्दर्यसंग जोडेर हेरिने हुनाले कपाल झरे समस्या धेरैको लागि तनावको विषय हुने गर्छ ।
कपाल झर्ने तथा तालु खुइलिने समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि अनेक औषधिहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, केही नक्कली कपाल रोप्ने वा लगाउने पनि गर्छन् । यसको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा घरेलु उपायलाई निरन्तर रुपमा अपनाउन सक्ने हो भने ती सबै तनावबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । घरेलु उपायले अन्य औषधिको तुलनामा ढिलो काम गर्छ, तर नकारात्मक असर नपारी नै राम्रो नतिजा दिन्छ ।
कपालको लागि कलोन्जीको तेल सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । कलोन्जी तेललाई अनियन सिड्स पनि भनिन्छ, तर यो प्याजको बियाँ भने होइन । कलोन्जीलाई परिकारहरु स्वादिष्ट बनाउनको लागि भान्सामा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ । भनिन्छ, कलोन्जीमा मृत्यु बाहेक अरु सबै रोगलाई निको पार्ने औषधीय गुण हुन्छ । कलोन्जीमा चिल्लो पदार्थ, फाइबर, जिङ्क, प्रोटिन, प्रोटिन, काइब्रोहाइड्रेट, आइरन, भिटामिन लगायतका पोषक तत्व हुन्छन् ।
तालु खुइलिनबाट रोक्नको लागि कलोन्जीको तेल लगाउनुभन्दा पहिले टाउकोमा कागती लगाउनुपर्छ । यसको लागि सुरुमा कागतीको रसलाई कपालको जराजरामा लगाएर मालिस गर्नुपर्छ । पन्ध्र देखि बीस मिनेटसम्म मालिस गरेपछि पानीले पखाल्नुपर्छ । त्यसपछि कपाल सुकाएर कलोन्जीको तेल लगाएर टाउको मालिस गर्नुपर्छ ।
देउवा भन्छन् प्रहरीलाई बर्खास्त गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति नदिऔँ
विद्युत् सर्ट भएर विद्यालयमा आगलागी
कुन मौसममा के खाने ? फाइदा हुन्छ यस्तो
भवन हस्तान्तरण नहुँदा गोठबाटै स्वास्थ्य सेवा
January 13, 2018 August 20, 2018